I-Farmhouse Ethokomele Eduze Nesikhumulo Sezindiza Ngendawo Yokupaka Yamahhala
Seriate, Lombardia, i-Italy
Ikamelo e-indawo esepulazini ibungazwe ngu-Hamza
U-Hamza uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
Kulungiswe kabusha indlu yasepulazini eneminyaka eyi-100 ebizwa ngeCascina Yuva etholakala eSerio River Regional Park ngengadi yemifino ephilayo. Indlu iseduze kakhulu nesikhumulo sezindiza i-Orio Al Serio, i-A4 Milano-Venezia Highway, iBergamo Fair kanye nendlela yomjikelezo we-Serio (Bergamo-Crema). I-Private Car and Bicycle Parking itholakala mahhala. Ukuhamba esikhumulweni sezindiza uma kuceliwe kungahlelwa. Igumbi lokulala eli-1 elibanzi elinokuxhumeka kwe-inthanethi nedeski lokusebenza elifanele ama-freelancers kanye nabahambi.
Sizama ukufeza umgomo wokuba umndeni ojabulayo kule ndlu yasepulazini kanye nabangane bethu, izihlobo, izivakashi, izitshalo nezilwane. Senza izingadi ezincane, ezivumelana nemvelo futhi sinezinkukhu ezimbalwa, izinja ezinhle ezingosayizi abancane ezi-3 namakati angu-3. Kunezihlahla zezithelo ezahlukahlukene, ama-hummocks angu-2 kanye netafula lokudlela langaphandle izivakashi ezingazuza.
Indlu inengadi enkulu evulekele i-Oasi Verde Park okuyipaki yomphakathi enkulu kunazo zonke eBergamo. Kukhona umfula kuleli paki owuhlukanisa ube izingxenye ezimbili lapho ungathola khona amakhilomitha ezindlela zokuhamba izintaba nezindlela zokuhamba ngebhayisikili eduze nomfula, izinkundla zokudlala, ezemidlalo zangaphandle, ukushiswa yilanga, indawo yokucima ukoma kanye nendawo yokudlela.
Kunesikhungo esithokomele se-GYM kanye nendawo yokubhukuda (yasendlini nangaphandle) ebizwa ngokuthi i-Aquamore Seriate imizuzu eyi-10 kuphela ukusuka endlini.
Kunezindawo zokudlela ezi-2 kanye nesitolo esikhulu esi-1 phakathi nebanga lokuhamba imizuzu emi-5-15.
Asingabazi ukuphendula imibuzo futhi sizimisele ukunikeza noma yiluphi uhlobo ulwazi mayelana nedolobha kanye nendawo yethu ukuze sikwenze ukhululeke ngesikhathi uvakashele Bergamo.
Inombolo yepholisi: 0042636/2021
Hlola ezinye izinketho ezise- Seriate namaphethelo